porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကောအသို့နည်း။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ဘယ်လိုသေချာမလဲ? အသက် ၄၀ ကျော်သူကိုမေးကြည့်ပါ။ ကိုသတိရပါ: သင်၏ဘိုးဘေးအင်တာနက်မရှိဘူး။ ထို့ကြောင့်သူတို့ထောင်ချောက်ထဲမကျခဲ့ပါ သူတို့ရဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာပုံစံကိုသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုအေးစက်စေတယ်ထိုကဲ့သို့သော voyeurism, tabs မျိုးစုံ, HD streaming hardcore, ရှာဖွေ / ရှာ, အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်း။ ၎င်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ ထူးဆန်းသောလုပ်ရပ်များ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အံ့အားသင့်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည် အသက်အရွယ်အသုံးပြုသူများကိုစတင်ပါ erotica ကိစ္စရပ်များစောင့်ကြည့်။ တစ်ဦးက ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ ဦး နှောက် ၎င်းသည် dopamine & opioid ထုတ်လုပ်မှုနှင့် neuroplasticity တို့၏အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သည် စွဲဖို့အလွန်အမင်းအားနည်းချက် နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်။ သူတို့သည်ယနေ့ခေတ်အမျိုးသားများနည်းတူတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အရာလည်းမဟုတ်ပါ။ ကြည့်ပါ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, Fantasy နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော နှင့် လိုက်တယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများ.
သင့် ဦး နှောက်သည် sensitivity အပြည့်ပြန်ရောက်လာသောအခါသင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသည်အလိုအလျောက်တိုးလာလိမ့်မည်။ သင်လုပ်စရာမလိုပါ do ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘာမှ; ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်သင်၏လိင်စိတ်နိုးထမှုကိုစိတ်ရင်းမှန်သူများနှင့်အေးအေးဆေးဆေးထားခြင်းမှအကျိုးရှိနိုင်သည် (အင်တာနက်မတိုင်မီကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်သဘာဝဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့) ။ ၎င်းသည်လူတိုင်းကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနည်းပါးသောသို့မဟုတ်လုံးဝမပါ ၀ င်သောလူငယ်များအတွက်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်“ ဝါသနာပါရန်” လိင်ဆက်ဆံရန်လိုအပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ (ကြည့်ပါ ငါ rewire နိုင်ရန်အတွက်လိင်ရှိသည်ဖို့ရှိပါသလား?) ။ တကယ်တော့တစ်ယောက်ယောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းသိကျွမ်းလာတာကအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပဲ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းနှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာသူအားအမှန်တကယ်လူတစ် ဦး နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူတစ် ဦး ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည် မပါဘဲ porn:
ငါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကြောင့်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ဖို့စွမ်းရည်ကိုမှောက်လှန်ပစ်လိုက်ပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ငါအပျိုဖော်ဝင်စကနေစပြီးငါကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်ပျော့ပျောင်းနေတယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တုန်းကငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာမှဖြစ်ပေါ်လာသောပျော်ရွှင်ဖွယ်ခံစားမှုများကိုသာတွေ့ကြုံခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်တွင်ပေါက်ကွဲသည်အထိ၎င်းတို့သည်တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်တစ်ခုတွင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ငါသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သူဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာကိုပြောခဲ့တာဒါကမဆန်းဘူးလို့ငါသံသယရှိတယ်။ ငါ့အိမ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုလွတ်အောင်ကူညီဖို့အဲဒါကိုအားကိုးမိတယ်။ ငါထိုအခါငါသာ porn နှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှတဆင့် cum နိုင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထင်ပါတယ်။ (သူက ဒီနောက်ပြန်ဆုတ် ယခု။ )
သငျသညျအများစွာသောမတူဘဲ, ငါစွဲဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတစ်ပါးအဖြစ်မသတ်မှတ်ဘူး။ ပုံမှန်အမေရိကန်၊ ၂၄ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ပါ။ ငါနဲ့ငါ့ကောင်မလေးတို့ပါ ၀ င်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာထက်ငါဟာကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့၊ ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့မြင်ကွင်းတွေထဲကိုဘယ်တော့မှမ ၀ င်ခဲ့ဘူး။
ငါထနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအလုပ်တစ်ခုကနေမထွက်နိုင်ဘဲနောက်ဆုံးတော့ပျော့ပျောင်းသွားတယ်။ blowjob တောင်မှအလုပ်မပြီးနိုင်ပါ။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့်မဝေးပါ။ သို့သော် GOOGLE ကိုသိသောသူထံလှည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ထို site ကိုတွေ့ခဲ့သည်။
ငါပထမတော့အတော်လေးသံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ reddit (အလားတူ fap မရှိ) နှင့်ဆင်တူသည့်အတွေးအခေါ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ကြားဖူးပြီး TedTalk ကဤခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးနေသည်ကိုပင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ဘဝကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိတ်ထဲကိုမရောက်မချင်းအရေးမပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာဘယ်သူမှခွဲခြားသိနိုင်မယ့်လက္ခဏာမရှိဘူး။ ငါပြောခဲ့သလိုငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲလမ်းသူလို့မထင်ဘူး porn သည်နေ့စဉ်အရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့်သာလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာပေါ် မူတည်၍ တစ်ပတ်လျှင် 5-7 ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် ငါဘယ်တော့မှမဆင်းရတဲ့အကြောင်းပြချက်အများကြီးမရှိခဲ့ဘူး။ ငါ ED နှင့်အတူမည်သည့်အခက်အခဲရှိခဲ့ဖူးဘူး, ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကျသုတ်ရည်လွှတ်ငါအခက်ခဲဆုံးပြwasနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ခဏအကြာတွင် ပို၍ ပျော့ပျောင်းလာပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်စတင်ခြင်းမပြုဘဲထွက်သွားပါကနောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ချက်မှာကျွန်ုပ်၏ခရီးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေခြင်းမှာကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ porn မပါဘဲ, ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ တခါတလေမှာငါဟာတကယ့်လူတွေအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွေးတွေနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့တယ်။ ငါလက်လှမ်းမမီတာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အဲဒီညမှာညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုမလိုချင်တာကြောင့်ပဲ (အသက် ၂၄ နှစ် - စွဲစွဲလန်းလန်းမဟုတ်သော်လည်းနှောင့်နှေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာသည် - ပျောက်ကင်းသွားပြီဖြစ်သည်။ )
တချို့ကယောက်ျား masturbating မရှိဘဲနှစ်ခုစိုစွတ်သောအိပ်မက်အဘို့စောင့်ဆိုင်း, ဒါသူတို့အလောင်းတွေများအတွက်ပုံမှန်ကြားကာလဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ, အဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်။
အောက်တွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ် porn ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်အချို့သောအမြင်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ ငါကကြှနျုပျတို့သညျဤ site ပေါ်တွင်အနှံ့ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အရာကိုအများကြီးဖမ်းယူထင်:
အကြောင်းအရာ: အကြောင်းရင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဒီဆောင်းပါးတွေကိုစိတ် ၀ င်စားစွာနဲ့ဖတ်ပြီးငါ့ကိုယ်ပိုင်ညစ်ညမ်းမှု / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းစမ်းသပ်မှုမှာပါ ၀ င်ခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့မိတာကတော့ယောက်ျားများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွေဖြစ်တဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှစ်ခုဟာအမြဲတမ်းအတူတကွစုစည်းနေပုံရပါတယ်။ ယောက်ျားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိဘဲ porn ကိုမကြည့်တတ်ကြဟုငါသဘောပေါက်သည် သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတစ်မျိုးတည်းသာရှိသောညစ်ညမ်းမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုဟုတ်မဟုတ်ကိုကောက်ချက်ချရန်ကြိုးပမ်းမှုရှိပါသလား။ ၎င်းသည်ပြproblemနာ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါဒီဟာအတော်လေးအသစ်သောပြissueနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ထားတယ်၊ လေ့လာမှုအများကြီးမလုပ်ခဲ့ဘူး။ သိပ္ပံနည်းကျရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သုတေသီသည်ရလဒ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဤလုပ်ဆောင်မှုများကိုခွဲထုတ်ရန်ကြိုးစားချင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံမှသာလျှင်ပြောရရင်ငါက၎င်း၏ညစ်ညမ်းမှုသည်တုန်ခါမှုမဟုတ်ဘဲ၊ တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလွန်ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ထူးဆန်းသည့်အရာမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မခံစားရပါ။ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသောအခါ၌ပင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အထိမနှိုးဆွနိုင်ပါ။ ငါ porn မတိုင်မီကကလေးဘဝတုန်းကလိုပဲတွေးမိတော့တယ်။ ငါနောက်ထပ်တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်လအကြာ, ငါ့စိတ်ကူးယဉ်ဘဝပြန်လာလျှင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ငါကြင်နာ၏ကလွဲချော်။
porn နှင့်မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ယောက်ျားနှစ် ဦး ၏မှတ်ချက်များကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ငါသာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ရှိလျှင်၊ ထိုနောက်ငါ၌ထိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်ငါ porn ကိုသုံးလျှင်၊ ငါသတိထားမိတာကရငျးနှီးဖို့လိုအပျပါတယျဆိုရငျ၊ ခံစားခကျြကပိုကောငျးပါတယျ။ ဒါပေမယ့်ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချုပ်တည်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးပိုမိုအင်အားကြီးမားတဲ့အတင်းအကျပ်လက်အောက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်းဒါကငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာပိုပြီးလှုံ့ဆော်မှုခံရတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သတိပြုမိဆုံးအရာမှာအမြင်အာရုံကိုလှုံဆော်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဘယ်လောက်ခက်ခဲသည်ဆိုသည်။ ဒါက porn ကိုအရှုံးပေးချင်ပေမယ့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ချင်တဲ့သူကိုငါပြောမယ်လို့ငါထင်တယ်။ porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုသင်လုပ်ချင်ချင်ချင်ချင်ချင်ချင်မှလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတစ်လအကြာမှာငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့မလွယ်ကူခဲ့ဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါသည်ငါ့အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သွားပြီးနောက်, ငါ့ဇနီးနှင့်လိင်အတော်လေးလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုအရမ်းလွမ်းတယ်
အဆိုပါ lube သတိရပါ!
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းကို 40 ရက်ပေါင်းမှာငါ masturbated ကြောင့်ငါဖြစ်ကောင်းတိုင်းရှိခဲ့ကိုအကောင်းဆုံးအော်ဂဇင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကမှားသည်ငါ့ဘဝတစျခုလုံး masturbating ခဲ့သဘောပေါက်! အရည်အခြေစိုက် lube နှင့်တစ်ဦးအလင်းဆုပ်ကိုင်တစ်တွေအများကြီးသင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်း Darth Vader chokehold ပိုပြီးကားကာမဂုဏ်ထိတွေ့မရှိပါ။
PMO ငါ့အသက်ကိုတစ်ဝေး-လွန်း-impairing အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်သောငါ၏သဘောပေါက်ကတည်းကနောက်ဆုံးလေးပတ်၌ငါနှစ်ကြိမ်ပြန်ရောက်သွားတယ်နှင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပင်ငါ၏အအတိတ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများစေပြီ။
PMO မပါဘဲနှစ်ပတ်နီးပါးအကြာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုများအကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ တစ်ညမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိဖို့ဒါမှမဟုတ်နှိုးဆွတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ဖို့နာကျင်ကိုက်ခဲနေတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲမြန်နေပြီးဒီအတွေ့အကြုံကကျွန်တော့်ကိုအော်ဂဇင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာငါနိုးလာတဲ့အခါအိပ်မက်မမက်ခဲ့ဘူး၊ PMO session တစ်ခုပြီးတဲ့အခါငါအမြဲတမ်းရှိခဲ့တဲ့ 'စိတ်ရှုပ်' မှုကိုမခံစားရဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါသိတာတစ်ခုကတော့လိင်အတွက်အော်ငိုနေတာပဲ။ စစ်မှန်သောလိင်။
ဒါကကိစ္စရပ်တွေကပိုပြီးခက်ခဲတဲ့နေရာပါ၊ ငါမကြားချင်တာကိုကြည့်ရတာ ဒါကြောင့်ငါလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကို - P မပါဘဲ M နှင့် O - ငါတစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးသောအရာကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့လိင်တောင်မှတစ်ခါမှမရဖူးဘူး၊ ဒါကဘယ်လိုလုပ်အလုပ်လုပ်ရမလဲ။
နှစ်ရက်အကြာမှာတော့ကျွန်မချထားသော, စိတ်ကူးပေါ် MO ကိုဖို့ P ကိုကဆက်ပြောသည်နှင့်ပြန်ရောက်သွားတယ်။
နှစ်ခုအတွေ့အကြုံများဒါစှာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ ငါမဘတ်ဇ်, အမြင်မရှိပြောင်းကုန်ပြီခဲ့သောကွောငျ့ဖွင့် MO ကို, ထိုဇာတျသိမျးမှာနီးပါးတုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာချိုမြိန်, ညျခှနျအားခံစားမှုဖြစ်ထွက်လှည့်။
ငါမူးယစ်ဆေးဝါးလုံးဝအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်တူသော PMO အပြည့်အဝ session ကိုခံစားရတယ်။ ရုပ်ပုံတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမီးတောက်လောင်နေသောတင်းမာမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲစေပြီး၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြတ်သွားတဲ့“ dope surge” လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ရုတ်တရက်အရာအားလုံးကိုပိုမိုပြီးပြင်းထန်စွာခံစားရတယ်။ ထိုအခါငါကငါ့ဖြစ်တည်မှုအပေါ်သုတ်သင်ပယ်ရှားသောမိုcloud်းတိမ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏, အရာအားလုံးထုံသွား၏။ ထိုခံစားမှုသည်ထာဝရဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးနှစ်ရက်လိုပဲ။
YBOP တွင်ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်သတိပြုရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း။
porn-free တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လူများကြာမြင့်စွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ ကျန်းမာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆိုလမ်းညွှန်ချက်များရှိပါသလား ရုံမလိုချင်တဲ့တင်းမာမှုလျှော့ချဘို့စောင့်နေကြလော့။ ဒါက NoFap အကယ်ဒမီသတင်းလွှာမှလာ:
ကျွန်ုပ်၏အစစ်အမှန်ဘဝမိတ်ဖက်နှင့်ပုံမှန်လိင်မှုဆိုင်ရာအမှတ်တရများနှင့်အတွေးများ (ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းသောဝတ်စားဆင်ယင်မှုများသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာမပါ ၀ င်ခြင်း) ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်အပေါ်ထားရှိသောသင်၏ရှုမြင်ချက်ကဘာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာဝေးလံတဲ့နေရာတွေမှာရှိနေပြီးကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အတွေးတွေကိုတစ်ပတ် ၁-၂ ကြိမ်အမှန်တကယ်ငါ့ကိုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ကင်းဝေးအောင်ကူညီပေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖယ်ရှားချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကဒီမှာတကယ်ရန်သူဖြစ်တယ်။ ငါ reboot လုပ်နေတာလား ဒီဟာကကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အရာလို့ငါမမြင်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်တွေကဘာလဲ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုသည့်“ ဟောင်း” အကျင့်စွဲစွဲလမ်းသူသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ အထူးသဖြင့်ပထမမျိုးဆက်အင်တာနက်အပြာအသုံးပြုသူများသည်လိင်မှုကိစ္စကိုကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နှင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကပေါင်းသင်းရန်သင်ယူခဲ့ကြသောကြောင့်၊ ညစ်ညမ်းမှုသည် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါသာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီး porn သို့ပြန်သွားမည်မဟုတ်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည့်အခါတိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကိုယ့်အတွက်ငြီးငွေ့စရာဖြစ်လာသည်မကြာမီ။ အစပိုင်းမှာလက်တွေ့ဘ ၀ မှတ်ဥာဏ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ ဦး နှောက်ဟာညစ်ညမ်းတဲ့မြင်ကွင်းများနဲ့လက်တွေ့မကျတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုများမှအမှတ်တရများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးသွားလိမ့်မယ်။ ထိုနေရာမှ၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာထူးဆန်းသောစိတ်ကူးယဉ်မှု၊ အပျော်တမ်းပုံရိပ်များသို့ ဦး တည်သွားပြီး၊ ထို့နောက်မှပင်ညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုဗီဒီယိုများသို့ပြန်လည်စီးဆင်းသွားလိမ့်မည်။
ကိုယ်အဘို့ငါအအေး-ကြက်ဆင်ချဉ်းကပ်၏ကြီးမားသောပန်ကာမိပါတယ်။ ပြန်လည်နာလန်ထူမှတဆင့်သွားအရက်သမားသူတို့ဘဝ၏ကျန်များအတွက်ခွက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်လာမည်မျှအလားတူအချို့ညစ်ညမ်းစွဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့ပြန်လာခဲအချိန်ရပါလိမ့်မယ်။ ငါ Fapstronauts NoFap ရဲ့စိန်ခေါ်မှုများမြားတှငျပါဝငျခွငျးပြီးနောက်ကျန်းမာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှပြန်လာနိုင်မထင်ပေမယ့်များစွာသောလူအဘို့ abstinence ၏ 90 ရက်ပေါင်းထက်ပိုရှည်ကြာပါသည်။
ငါ anti-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဇေလုပ်မပေးဘူး။ သင်ကအနုတ်လက္ခဏာသငျ့ဆကျဆံရေးသို့မဟုတ်သင့်ဘဝကိုတခြားဒေသများထိခိုက်မပေးကြောင်းယုံကြည်လျှင်, ငါသည်ထိုသို့ပြုမှမဟုတ်သင်ပြောပြမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကချောဆင်ခြေလျှောဖြစ်ဟန်နှင့်ကတဖြည်းဖြည်းဟောင်းအလေ့အထသို့ပြန်လဲကျဖို့လွယ်ကူရဲ့စိတျထဲမှာသိမ်းထားပါ။ သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုလက်တွေ့မစိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းကးဆီသို့ဦးတည်ခေါ်သောကြောင်းသတိပြုမိခဲ့လျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကအခြားချိုးယူအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်သည်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဆွေးနွေးထားပါတယ်။ "No More မစ္စတာ Nice Guy '
ထဲမှာများလွန်းမကြာမီတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-မပါဘဲ-porn ထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သူတစ်ဦးယောက်ျားတစ်ယောက်ထံမှနောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးသတိပေး ကို restart ဖြစ်စဉ်ကို:
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးပမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး ၃ ရက်ကြာညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုမှာရက်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ကြာပြီးကျွန်ုပ်၏ဒုတိယကြိုးပမ်းမှုမှာ ၄၅ ရက်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကြိုးပမ်းမှုအပြီးထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်စိတ်ဓာတ်ကျစေပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျွန်ုပ်လုံးလုံးလွင့်စင်သွားစေခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုကြိုးစားမှုတွင်, ငါသာညစ်ညမ်းဖယ်ရှားပစ်။ ငါလိင်ရှိသည်ဖို့ဆက်လက်နေဆဲရံဖန်ရံခါ masturbated, ဒါပေမယ့်ဒီထက်မကြာခဏအရင်ကထက်။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်း relapse ဖို့တံခါးပေါက်ဖြစ်ဟန်ကတည်းကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုငါ့နိဂုံးကိုမှနှစ်ဦးစလုံးကြိမ်နှင့်အကြီးအကျယ်နှောင့်နှေးပြန်လည်နာလန်ထူဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ငါ 'တင်းမာမှုကိုလျှော့ချဖို့အတွက်တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း' ကိုဆုံးဖြတ်မည်။ ဒါကအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်လို့နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါထပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကဒုတိယကြိုးပမ်းမှုနောက်ကျောခေါင်းထဲပြန်ဝင်လာပြီးအမြင်အာရုံပြင်းထန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခါငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုလိုသည့်ရုပ်ပုံများကိုအွန်လိုင်းတွင်စတင်လေ့လာလိမ့်မည်။ ဒါက porn မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မိလို့ကောင်းလိုက်တာ။
သငျသညျခန့်မှန်းနိုင်သကဲ့သို့ငါ masturbate ဖို့ဆုံးဖြတ်လာမယ့်အချိန်, ငါပြည့်စုံတဲ့ porn မူးရူးပေါ်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအချိန် porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, လိင်ကနေပြီးပြည့်စုံသော abstinence ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ပြောတာက (အောင်မြင်စွာ reboot လုပ်ပြီး၊ porn ကိုထပ်သုံးလို့ရမယ်လို့ထင်ပြီးလပေါင်းများစွာကြာအောင်စွဲလမ်းနေတဲ့)
မရှောင်လွှဲနိုင်ရင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုစိတ်ထဲမထားပါဘူး ဒါပေမယ့် porn မပါဘဲဖြစ်ရမယ်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အရက်သောက်ဖို့ကြောက်နေပြီ။ ငါမကြာသေးခင်ကတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကနေစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ငါဟာရက်ပေါင်းများစွာအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ The“Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု"အရမ်းခိုင်မာတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။